कांग्रेसमा भागबन्डाका आधारमा सिफारिश भएका कुन ‘मन्त्री’ कस्ता छन् ? « Pahilo News
कांग्रेसमा भागबन्डाका आधारमा सिफारिश भएका कुन ‘मन्त्री’ कस्ता छन् ?
प्रकाशित मिति : 25 August, 2016 10:59 pm
९ भदौ । प्रमुख सत्तारुढ दलले लामो समयको रस्साकस्सी र बार्गेनिंगपछि बल्ल मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । शुक्रबार विहान ११ बजे शीतल निवासमा हुने शपथका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीसँगै महाधिवेशनमा पराजित रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुृमबहादुर खड्का समेतको भागबन्डाका आधारमा मन्त्री चयन गरिएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट छानिएकामा अर्जुननरसिंह केसी सहरी विकास, बालकृष्ण खाँड रक्षा, प्रकाशशरण महत परराष्ट्र, केशवकुमार बुढाथोकी सामान्य प्रशासन, जीवनबहादुर शाही पर्यटन र सूर्यमान गुरुङ श्रम छन् ।
तिनीहरुमध्ये नुवाकोटका केसी अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पटक मन्त्री हुनेमा पर्दछन् । महाधिबेशनमा देउवाका तर्फबाट महामन्त्रीमा उठेका उनी संस्थापन पक्षले नुवाकोटकै रामशरण महतलाई च्यापेपछि छायाँमा पर्दै आएका थिए । नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापकमध्येका एक उनी पञ्चायतको आखिरी समयमा पञ्चायतमा प्रवेश गरेका थिए । बहुदल आएपछि राप्रपा (थापा) मा सामेल उनी पछि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनी कांगेसको प्रवक्ता र सहमहामन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । केसीले यसअघि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् ।
रुपन्देहीबाट एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई ८६ मतान्तरले हराएर सांसद भएका बालकृष्ण खाँड पञ्चायतविरोधी विद्यार्थी राजनीतिबाट कांग्रेसमा सक्रिय बनेका हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् । यसअघि सिचाइँ र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिसकेका खाँडले देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा आएलगत्तै सरकार परिवर्तनका पक्षमा जोड दिँदै आएका थिए ।
सात पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका डा. रामशरण महतका सहोदर भाइ प्रकाशशरण महत यसअघि परराष्ट्र राज्यमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रुपमा अनुभव हासिल गरेका छन् । हालै नेविसंघको महाधिवेशन गराउन देउवाले दिएको जिम्मेवारी सफलतासाथ सम्पन्न गरेका उनी नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री हुन् ।
झापाका केशवकुमार बुढाथोकी पञ्चायतका उत्पादन हुन् । पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र मन्त्री भइसकेका उनी बहुदल आएपछि कांग्रेस बनेका हुन् । पहिला कोइराला खेमामा रहेका बुढाथोकीले गत महाधिवशेनमा देउवालाई साथ दिएको पुरस्कार पाएका छन् ।
हुम्लाका जीवनबहादुर शाही पहिलो पटक सांसद बनेका हुन् । ०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सभापति निर्वाचित भएका शाहीले स्कुल शिक्षा बुढानिलकण्ठबाट हासिल गरेका हुन् भने उच्च शिक्षा हार्वड कलेजबाट लिएका छन् ।
ताप्लेजुङका सूर्यमान गुरुंग लामो समय कांग्रेसमा क्रियाशील सोझा नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनी जिल्लमा लोकप्रिय छन् ।
नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्रीमा सिफारिश भएकी सिरहाकी सीतादेवी यादव कांंग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सभापति तथा जिल्ला विकास समितिका सभापति चन्द्रनारायण यादवलाई माओवादीले हत्या गरेपछि राजनीतिमा आएकी हुन् । गत महाधिवेशनमा पढालेखा तथा पटकपटक मन्त्री भइसकेकी चित्रलेखा यादवलाई पराजित गरेर कोषाध्यक्ष बन्दै सबैलाई आश्चर्यमा पारेकी उनले यसपटक मन्त्री हुन साह्रै रहर गरेपछि सिफारिमा परेकी हुन् ।
सिचाइँमन्त्रीमा सिफारिश भएका दांगका दीपक गिरी जुझारु र पार्टीभित्र लोकप्रिय मानिन्छन् । महामन्त्री सशांक कोइरालाको विश्वास जितेर उनी मन्त्रीमा सिफारिश भएका हुन् । खुमबहादुर खड्काको सिको गर्दै दांगको राजनीतिमा बाहृुबलको प्रयोग गर्नमा उनी सक्रिय छन् ।
बाणिज्यमन्त्रीमा सिफारिश भएका मुस्तांगका रोमी गौचन थकाली यसअघि पराराष्ट्र राज्यमन्त्री बनेका थिए । उत्तरी सीमान्त जिल्लाका यी नेताका भारतीय पक्षसँग प्रगाढ सम्बन्ध छ । यिनीमार्फत नै भारतीय दूतााबासले मुस्तांगमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
उद्योग मन्त्रीमा सिफारिश भएका काठमाडौँका नवीन्द्रराज जोशी ०४९ सालमा महानगरपालिका उपमेयर थिए । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट पार्टीमा सक्रिय भएका उनी मृदुभाषी र अध्ययनशील नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्रीमा सिफारिश भएका सुर्खेतका हृदयराम थानी दोस्रो पटक निर्वाचित सांसद हुन् ।, गत महाधिवेशनबाट पहिलो पटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी गत महाधिवशेनमा सुर्खेतमा देउवापक्षधर पूर्णबहादुर खड्कालाई ठेगान लगाएवापत पुरस्कृत भएका हुन् ।
कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट महामन्त्रीमा लडेका काठमाडौँका गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिश भएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बन्न नदिएपछि एकाएक चर्चामा आएका उनी दोस्रो पटकका सांसद हुन् । कांग्रेसभित्र राम्रो सम्भावना भएका नेताका रुपमा स्थान बनाएका उनले अहिले संसद्का प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्दा चाहिँ खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
खुमबहादुर खडका समूहबाट बनमन्त्रीमा सिफारिश भएका तनहुँका शंकर भण्डारीले गोविन्दराज जोशीलाई विस्थापित गर्दै जिल्लाको राजनीतिमा स्थान बनाएका छन् । उनी साथीभाइबीच मिलनसार र सहयोगी नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
यसअघि देउवा पक्षका विमलेन्द निधी गृहमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री र रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री भइसकेका छन् ।